UBlas Ruiz Grau. Udliwanondlebe nombhali weSaga yeMors | Uncwadi lwangoku
UBlas Ruiz Grau. Udliwanondlebe nombhali weSaga yeMors
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Inoveli emnyama
UBlas Ruiz Grau Ungomnye wemizekelo ebalaseleyo kukho yombhali ozipapashayo ongena kwindawo yokupapasha yesizwe ngelixa egcina impumelelo yakhe. Ngamafutshane, ikhupha isihloko sayo esilandelayo, Ababulali abaXhalabileyo 2Isincoko esilandelayo esapapashwa ngo-2019 kwezona psychopath zimbi embalini. Kodwa eyona mpumelelo yaziwayo yeyakhe isaga seMors, ezenza Akukho buxoki, Awuyi kuba y Awuyi kufa. Kule udliwano ndlebe Isixelela kancinci ngayo yonke into. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho kunye nobubele bakho ukundinceda.
IBlAS RUIZ GRAU
UAlicante ukusukela kuma-84 azalwe ngo URafael, UBlas Ruiz Grau wazipapasha ngokwakhe inoveli yakhe yokuqala, Inyaniso iya kukukhululaUnyaka olandelayo wafika ukuqhubeka kwawo, Isiprofeto saboni, eyayiyimpumelelo enkulu kwintengiso. Kunye Iikryptos, isihloko sayo sesithathu, sabekwa kwindawo yesibini yabona bathengisi babalaseleyo kwaye ngo-2017, ngo Iintsuku ezisixhenxe zokuhamba, iqinisekisile ngakumbi ngoqikelelo lwayo. Kunye Makungabikho mntu uchukumisa nantoni na!Isincoko esimalunga neentsomi nenyaniso yamapolisa nenkqubo yezobupolitika, yema njengomgangatho kuphando lolwaphulo mthetho.
IBlas RUIZ GRAU - UDLIWANO-NDLEBE
IINDABA ZONCWADI: Uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo? Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
IBlas RUIZ GRAU: Malunga nencwadi yokuqala ndiyathandabuza ukuba ibiyenye ye Iingcali zeTramamusician okanye Asterix kunye no-Obelix. Ngayiphi na imeko, njengomntwana bendikuthanda ukufunda ii-comics kwaye veki nganye bendizithenga.
AL: Yeyiphi le ncwadi ikuchaphazeleyo kwaye ngoba?
BRG: Ndothuke nyani Ikati yokugqibela. Ndicinga ukuba yayilixesha lokuqala endinxibelelana kakhulu (omnye kule meko) umlinganiswa ophambili. Ndacinga ukuba sesona sitshixo sokwenza uphawu lokufunda.
AL: Umbhali oyintandokazi okanye ababhali? Unokukhetha kuwo onke amaxesha.
BRG: Okwangoku iyandiphambanisa UMikel Santiago. Andiqondi ukuba umntu uyenza njengaye.
AL: Ithini inqaku eliqhelekileyo okanye uphawu lwazo zonke iinoveli zakho kwaye ucinga ukuba uvele njani ukusukela kwesi sihloko sokuqala ozipapashileyo?
BRG: Ndicinga ukuba ndikufezekisile oku bendikuthethile ngasentla, ukuba abafundi badibane nabalinganiswa bam kwaye bazive kwaye baphile oko bakuko. Ndithatha inkathalelo engakumbi yesicatshulwa kwaye musa ukutsiba kuqala kwinto ephumayo. Ndisaxakekile, kodwa intloko yam iyabaleka ngelixa ndihleli.
BRG: Kumhloli Amaia salazarnguDolores Redondo.
AL: Ngaba kukho naziphi na izinto ozithandayo xa kufikwa ekubhaleni nasekufundeni?
BRG: Konke cwaka onako.
BRG: ngoku kunjalo xa bendishiya.
AL: Uhlobo loncwadi oluthandayo?
BRG: Ndiyayithanda i inoveli yembali.
I-BRG: Zombini, kunjalo. Ngumzuzu ombi ngokubanzi ngenxa yemeko esikuyo esingazange sayibona, kodwa thina babhali kufuneka siyiqonde into yokuba, ngokomsebenzi, asinakukhalaza kuba kuninzi kakhulu okufundwayo ngoku.
AL: Ucinga ukuba imeko yokupapasha yenzelwe ababhali abaninzi ukuba bakho okanye ufuna ukupapasha?
I-BRG: Ngokuphosakeleyo ayilunganga. Andifuni ukuthi kukho ukugcwala, ngekhe, kodwa kuyinyani oko baphantse babaninzi ababhali kunabafundi. Ngaphezulu kwako konke, ngengqondo yokuba uninzi lufuna kuphela ukufunda ababhali babo kwaye bakufumanise kunzima ukuvulela abanye abantu abangabaziyo. Iyakhathaza loo mbhali oqala kakhulu (ndiyazi, kuba nam bendikhe ndadlula kuyo).
AL: Ngaba umzuzu wobunzima esijamelana nawo unzima kuwe okanye uya kuba nakho ukugcina into elungileyo kwiinoveli ezizayo?
BRG: Kunzima kum njengaye nabani na. Ngokwengqondo le nto yinkomo, akusekho. Emsebenzini andikwazi ukukhalaza kuba ndiwuphindaphinde kathathu umsebenzi wam. Ewe ngokunjalo, kwiinoveli zam awusoze ubone nantoni na enento yokwenza ne-coronavirus Akukho nto ngokufanayo. Andiziva ndithetha ngalencwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UBlas Ruiz Grau. Udliwanondlebe nombhali weSaga yeMors
Ilanga ezinzulwini zobusuku